မြန်မာပြည် burma | Global-Providence LaserEarthShields
အကြှနျုပျတို့ကိုအုအာကာသကနေ Damocles ဓားကိုတွန်းလှန်ဖို့ကမ္ဘာမြေ၏လေဆာဒိုင်းလွှား,
Electro-မီးတောင်ရေခဲ-အသက်အရွယ်နှင့်သံလိုက်ထမ်းဘိုး၏ပွောငျးပွ – က (ကျောက်လေထုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့်) geomagnetic စူပါမုန်တိုင်းများ & ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအလွန်အကျွံအာကာသလျှပ်စစ်မီးဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည်လည်းအနုမြူလက်နက်များ၏ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသုဉ်းအဖြစ်အပျက်ရှောငျလှဲဖို့! အဆိုပါအဆိုပြုချက်နာဆာ-ESA ၏နိုင်ငံတကာအာကာသတက္ကသိုလ်ဟောင်းမဟာဌာနမှူး, ဒေါက်တာ Pelton ကထောက်ခံနေပါသည်!
အာကာသကနေရှေးဟောငျးအီဂ, မှတျတမျးတငျထားလျှပ်စစ်သံလိုက်စူပါမုန်တိုင်းများကမ္ဘာမြေပျက်စီး။ [1 Peratt အေ, LaViolette P. ] ။ သူတို့မှာစူပါမုန်တိုင်းများအားဖြင့်သွေးဆောင်ရုတ်တရက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအားဖြင့် [အောင်မြင်သော [2 ကယ်လီ R. ] စစ်ပွဲတွေရဲ့မူလအစ, အခြားလူလည်း fatalist အောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်သောသူသည်, အချို့လူတွေဟာထိတ်နှင့် fatalist လည်းဖန်ဆင်းတော်နှင့်သစ်တောပြုန်းတီးမှု, ကျွန်ပြုမှုထိတ်-နိုင်ငံတို့, သောပြိုကျ 3] … ယခုမူကား, လုံခြုံ, ရာကျော်ဘဝကိုသေချာစေရန် , ကယ်တင်များအတွက်အဆိုပြုချက် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘိုးရင်းအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့် – ) မေးလျှင်,  နှငျ့ World Congress မှာဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
အ geomagnetic စူပါမုန်တိုင်းများပြီးနောက်  (အ 2005/2016 (ကျရှုံး၏, 1859 ခုနှစ်၏ Sun က 🙂 (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက် Carrington), 1989 ခုနှစျကွိဘက်၏ (အနက်ရောင်ထွက်), ဆွီဒင်၏ 2003 ခုနှစ် (အနက်ရောင်ထွက်) ကဖြစ်ပေါ်အောက်ပါ ဂျီပီအက်စ်) နှင့်တစ်ဦးအလွန်ခိုင်ခံ့သောနေရောင်ခြည်စူပါမုန်တိုင်းကနေအားလုံးအနုမြူလက်နက်များအားဖြင့်ပေါက်ကွဲမှုအနေဖြင့် 2012 ခုနှစ်ဇူလိုင်လအနီး-လွဲချော်မျိုးသုဉ်းအဖြစ်အပျက်,  (နာရီအနည်းငယ်အဘို့လွဲချော်! ), (), တစ်ဦးတစ်ဦးအဆိုပြုချက်ကို လေဆာ Plasma ၏ Shield ကိုလူသိရှင်ကြားသိရသည်။
: ပထမဦးဆုံးရဲ့အာကာသလျှပ်စစ်မီး (နေမင်း, လျှပ်စစ်, မီး, အနီယွန်မီးသီးများတူပလာစမာ) Aurora တဘက်, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့
– ကပင်ပြည်တွင်းဖြစ်အလျှပ်စစ်ပြက်-ချောင်းတွေများကလမ်းကြောင်းပြောင်းထားတဲ့ကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်ပြာ [11- Gurevich အေ] ကနေလျှပ်စစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်;
– တူအာကာသလျှပ်စစ်မီး,  လျှပ်စစ် Galactic စင်တာအားဖြင့်ဖြစ်စေ, Sun က [13- Simpson ဂျေ] အားဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ကြယ်ပွင့်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ထိုကျောက်ကိုလှုံ့ဆျော, နှင့်ခိုင်ခံ့သောငလျင် [14- ဂျိန်း, R ကို] ဖြစ်ပေါ်စေသည်;
– က Crater အတွက်ချြောတာမျိုးအတူတူအာကာသလျှပ်စစ်မီးအခါ, မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် [15 Ebisuzaki T. et al] နှင့်မြင့်တက်မီးတောင် cloud-အအေး, ဝင်ရိုးစွန်း glaciation လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်သစ်တစ်ခုမီးတောင်ရေခဲခေတ်အဘို့အစိုးရိမ်မှုတွေတိုးပွား  …
– ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာမြေအားဖြင့်ဖြတ်သန်းမယ့်မြင့်မားတရားစွဲဆိုလျှပ်စစ်ဂြိုဟ်သိမ်သို့မဟုတ်ကြယ်တံခွန် , ထိုသံလိုက်ထမ်းဘိုး reverse နှင့်သေစေနိုင်သောနတ်မင်းကြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကြီးကျယ်သောစူပါတာဝန်ခံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်စေခြင်းငှါ, သာနှစ်အနည်းငယ် / ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအလွန်အမင်းအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါစေ! –  – Nowaczyk N.R. & ESA ကအံ့ဆဲဆဲင်ကိုကွောကျရှံ့ – ) ။
ကို CERN မှာစမ်းသပ်မှုသည်မိုဃ်းတိမ်  Galactic နတ်မင်းကြီးရောင်ခြည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (ပြီးသားအာကာသကထုတ်လုပ်, အဓိကအားဖြင့်မီးတောင်အလေထု Aerosol, လှုံ့ဆော်ကြောင်းပြသ: Sun-ကမ္ဘာမြေ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်နတ်မင်းကြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု [20- Mukherjee အက်စ်] ဤကဲ့သို့သောအလုပ်ဖြစ်တယ် အတူတူရေကိုအခိုးအငွေ့နှင့်အတူကျောက်၏ဆွ), ကို၎င်း, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးထုတ်လုပ်  နှင့်ဆွ၏ဒီဂရီအပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့အေးစက်နေတဲ့ Jet- အားဖြင့်အအေးဥတုရာသီ (ပေါင်းအပူ-လှိုင်းတံပိုးအတွက်နွေးထွေးသောရာသီသို့မဟုတ်မိုးပြင်းထန်စွာရွာသွန်း၏အလင်းရွာသွန်းမှု မာယာဖျက်ဆီးခံရကြောင်းလုပ်ကွက် subwater မီးတောင်များက  အပူနှင့်အယ်နီညိုကြောင့်စမ်းချောင်း ) ကိုမကြာသေးမီ, electro-မီးတောင် Little ကရေခဲပြင်-အသက်အရွယ် (1257-1900) ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, အအေးဥတု၏မိုးခေါင်နှင့်အတူပြောင်း, Aztecs, လူတို့သည်အင်ကာ အခြို့သောထုံးတမ်းစဉ်လာမီးတောင်ဆောင်းရာသီတူဘုရင​​်, Mycenaean ကျူးကျော်, ရောမနှင့်အခြားသောပျက်စီး …
နေမင်း၏ Electro-သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏လက်ရှိလျော့ကျလာခွန်အားကိုလည်းကမ္ဘာမြေ၏ Electro-သံလိုက်စက်ကွင်းအားနည်းနေခြင်းနှင့်အာကာသကနေဝင်လာသောဓါတ်ရောင်ခြည် [သိပ္ပံ 25- အမေရိကန်အမျိုးသားအကယ်ဒမီ, Palmer ကဃ] အနေဖြင့်သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်များပေါ်ပေါက်။
[26- Steinhilber အက်ဖ် / ဘီယာဂျေ Schatten K. / Tobiska ဒဗလျူ, Kirkby, Livingston / Penn, Lockwood, Svensmark, Abdussamatov, Corbyn) ကို electro-မီးတောင် Little ကနှင့်ဆင်တူသည်နက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နိမ့်ဆုံး, ခန့်မှန်းထိပ်တန်း astrophysicists ရေခဲပြင်-ခေတ် “မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုနေရောင်ခြည်လှုပ်ရှားမှု၏အချိန်ကြာမြင့်စွာ minima ၏ကာလအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်” သောအခါ, (27- Strestik ဂျေ, Casati အမ်] ။ ထိုအ “သင်ဒီမျိုးကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုခဲ့ အကယ်. [တကမ္ဘာလုံးကြီးကျယ်] ရဲ့ပွောဆိုကွကုနျအံ့ ဥရောပအလယ်ယနေ့အတွက်သက်ရောက်မှုကြီးမားလိမ့်မည်နှင့်လအနည်းငယ် [28- Druitt T. et al] “အတူတူသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်ရဖို့လုံလောက်တဲ့မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရှိရာ, (-29 ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Lagrangian အချက်များအတွက်) အီကွေတာကိုကျော်မြင့်မားသော, တက်ကြွ Crater ကျော်သွင်းထား, လေဆာပလာစမာ၏ဒိုင်းလွှားတဆင့်, အခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကမ္ဘာမြေကိုလှုံ့ဆျောသောအလွန်အကျွံအာကာသလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏တွန်းလှန်အဆိုပြုနှင့်ဂြိုဟ်တုပိုက်ကွန်ကိုအားဖြင့်တစ်ဦးလေဆာဒိုင်းလွှားကို အများဆုံးအာကာသလျှပ်စစ်မီး၎င်း၏ထောင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်, , geomagnetic စူပါမုန်တိုင်းများနှင့်သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းခွ (USA တွင်မကြာသေးမီက, electro-မီးတောင်သွေးဆောင်, -51oC & -81oC တူစတင်နေပြီသော) မီးတောင်ဆောင်းရာသီဖြစ်စေတဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်တို့သို့ ။ Petawatt လေဆာ  ယခုဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုလည်းအဆိုးဆုံးဇာတ်လမ်း၏အမှု၌, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ afforestation တင်ပြသည်။